Apartment kufuphi Cerknica Lake
Indlu yethu ikwidolophu entle yaseCerknica, kumgama oziikhilomitha ezi-1 kuphela ukusuka echibini laseCerknica. Indawo yendlu ilungile kuhambo olufutshane okanye iindledlana ezinde zokukhwela intaba malunga nemeko yekarst yommandla, kubandakanya iLake Cerknica, amahlathi, amadlelo, imigxobhozo, imiqolomba (kubandakanya umqolomba weKrižna) kunye neRakov Škocjan gorge.
Sivuya kakhulu malunga neendwendwe zethu ezintsha. Siya kuzama ukwenza ukuhlala kwakho kube mnandi kwaye kukhunjulwe ngokusemandleni. Wamkelekile!
Sinezinto ezininzi zabantwana ngenxa yokuba sinomntwana omncinci, ngoko ke ndivakalelwa kukuba yindawo efanelekileyo kakhulu kwiintsapho eziza kuhlala. Njengomntu onomntwana omncinci, kumnandi kakhulu ukuhamba kwaye wazi yonke into oyifunayo iya kuba lapho.
Indlu izele yimizobo evela kumagcisa asekuhlaleni awaziwayo.
Indawo ehlala ingahoywa, indawo engaqondakaliyo nengaqondakaliyo yaseSlovenia, ebizwa ngokuba yiNotranjska ibekwe kumazantsi-ntshona elizwe. Ipaki yoMmandla yeNotranjska igutyungelwe yindalo emangalisayo yeKarst kunye nobuhle kwaye umntu unokucinga ukuba idlala amaqhinga!
Lo mmandla libala lokudlala labahambi abakhutheleyo, abathanda ukuphonononga indlela ebethiweyo kwaye banombono ocacileyo wokuhamba nawo. Ukusuka kwiintaba apho unokuhlangana khona negqwirha okanye ibhere, ngaphesheya kwechibi, ngamanye amaxesha ikwayintsimi eyomileyo, ngokusebenzisa intlambo enendawo etyumzayo ukuya kwinqaba entle efihlwe emaweni.
Ukuba ufuna ukubaleka kwingxolo yehlabathi elihambele phambili kwezoshishino kwaye ufumane indawo yokusabela kwindalo engonakaliswanga, phakathi kwemithi nakumanzi acwengileyo, kuxolo nenzolo yelizwe langaphantsi; ukuba unqwenela ukuva ingoma yeentaka, kwaye unqwenela ukukhumbula isandi samasele; ukuba awuzange utyibilize kwiinqwelomoya ezinomkhenkce ezingapheliyo; ukuba ufuna ukubona apho iintaka zenza khona iindlwane zazo; ukuba unqwenela ukuphumla, yiva umoya wakho uphakanyisiwe kwaye amandla akho evuselelwe, yiza eNotranjska.
We are family of four and like to meet new people. We also like to travel and we know what family needs when on the road.
Usapho lwethu luhlala kwindlu enye kwigumbi elahlukileyo ukuze sihlale sikucebisa malunga neendawo ezintle eSlovenia kwaye usele ikofu nawe. Amaxesha amaninzi kukho nokuba abemnye wethu ekhaya.